शिवरात्रिमा शिवपूजनको महत्त्व | गृहपृष्ठ
Home प्रडक्ट शिवरात्रिमा शिवपूजनको महत्त्व
प्रडक्ट7views
शिवरात्रिमा शिवपूजनको महत्त्व
— आचार्य कृष्णशरण खनाल
शिव शब्दको अर्थ कल्याण भन्ने हुन्छ । यस अर्थमा शिव कल्याणकारी देव मानिन्छन् । शिवजी गुणको विषयमा प्रसिद्ध आख्यान नै छ– क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अर्थात् उनी क्षणभरमै खुशी हुन्छन् र (रिसाउने कार्य भएमा) क्षण भरमै रिसाउँछन् ।
शिवको पूजा पद्धति पनि एकदमै सरल छ । हाम्रो सनातन परम्परामा प्रायः प्रातकालीन वा दिवाकालीन अनुष्ठान धेरै हुन्छन् । तर, कतिपय रात्रिकालीन अनुष्ठान पनि प्रसिद्ध छन् । विशेषगरी चारओटा रात्रिकालीन अनुष्ठानलाई धर्मशास्त्रले निकै महत्त्व दिएका छन्– कालरात्रि अर्थात् नवरात्रिअन्तर्गतको महाष्टमीको रात्रि, महारात्रि अर्थात् महाशिवरात्रि, मोहरात्रि अर्थात् श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको रात्रि र दारुणरात्रि अर्थात् होलिका दहनको रात्रि । यी चार रात्रिमा गरिएको जपानुष्ठान निकै नै फलदायी हुन्छ भन्ने शास्त्रीय कथन छ ।
शिवपुराणको विद्येश्वर संहितामा यसै पावन महारात्रिमा सर्वप्रथम भगवान् ब्रह्मा र भगवान् विष्णुले बाबा भोलेनाथको निराकार विग्रहको प्रतीक शिवलिङ्गको सर्वप्रथम पूजा गरेको र उहाँहरूले पूजा गरेकै भएर शिवरात्रिको रातमा गरेको शिवलिङ्ग पूजनको प्रभाव अत्यधिक भएको मान्यता छ । अन्य पुराणमा भगवान् शङ्कर र माता पार्वतीको विवाह यसै दिन भएको चर्चा पनि पाउछौं । अन्य समयमा शिवको विशेष सेवा, पूजा गर्दा पनि प्राप्त नहुने फल शिवरात्रिमा थोरै गर्नाले नै प्राप्त हुन्छ ।
शिवपुराणमा कथा छ– कुनै गाउँमा एक व्यक्ति बस्थ्यो । ऊ आफ्नो गुजाराका लागि जङ्गलमा शिकार गरेर ल्याउँथ्यो । एक दिन ऊ सदाझैं शिकार खेल्न जङ्गल गयो तर दिनभर कुनै शिकार पाएन । यस्तैमा साँझ प¥यो । अब उसले विचार ग¥यो– दिनभरि चर्न–खेल्न यताउता लागेका जनावर रातमा त पक्कै पनि आफ्नो ठाउँमा फर्केलान् । यस्तो सोचेर यताउता हेर्दा एउटा ठूलो वृक्ष देख्यो र सोच्यो यसै वृक्षमा चढेर हेर्नुप¥यो, टाढाबाट आउँदै गरेका कुनै जनावरहरू देख्छु कि ? ऊ चढ्यो, जनावर हेर्ने धूनमा त्यस वृक्षको टुप्पोसम्म चढ्दा पनि कहीँकतै उसले जनावर देखेन । रात पर्‍यो । उसलाई त्यस वृक्षबाट तल झर्न पनि सम्भव भएन वृक्षमा काँडा थिए र अँध्यारो भएकोले ती काँडा प्रष्टसँग देखिँदैनथे । रातभर त्यो शिकारी त्यही वृक्षमा बस्यो । जनावर आउँछ कि भनेर हेर्न सजिलो होस् भनेर ऊ रूखका पातहरू टिप्दै तल झार्थ्यो ।
जब ब्रह्ममुहूर्त भयो, उसका अगाडि भगवान् शिव प्रकट भएर भने, ‘बाबु तिम्रो पूजाबाट म अत्यन्तै खुशी भएँ, वरदान माग ।’ शिवजीको यस्तो कुराले शिकारी छक्क पर्‍यो । रातभरि शिकारको प्रतीक्षा गर्नु पनि भगवान्को पूजा हो र ? त्यत्तिकैमा उसलाई स्मरण भयो, ओ हो । आज त शिवरात्रि पो हो । तर, मैले कसरी भगवान्को पूजा गरेँ र ? शिवजीलाई उसले सोध्यो, ‘प्रभु मैले कसरी हजुरको पूजा गरेँ र खुशी हुनुभयो ।’ भगवान्ले उत्तर दिए, ‘बाबु दिवाकालमा यसै रूखको मुनि बटुवाले मेरो लिङ्ग बनाई पूजा गरेका थिए ।
रात्रिकालमा घोर जङ्गल छ, यहाँका जन्तु जनावर आउलान् र हानि पुर्‍याउलान् भनी डरले उनीहरू आफ्नो बाटो लागे, तर तिमीले सन्ध्याकालदेखि अहिलेसम्म मनमा कुनै डर नमानी त्यस लिङ्गमा बेलपत्र चढाइरह्यौं । त्यसैबाट म प्रशन्न भएर तिमीलाई वरदान दिन भनी प्रकट भएको हुँ ।’ भगवान्का वचन सुनेर शिकारी छक्क पर्‍यो । वास्तवमा शिकारी चढेको रूख बिल्ववृक्ष (बेलको रूख) रहेछ । उसले शिकार छेक्छ भनेर टिपेर खसाएका बेलपत्र रूखको फेदमा भएको शिवलिङ्गमाथि पर्दा रहेछन् र त्यही पूजाबाट परमात्मा शिव खुशी भई दर्शन दिन आएका रहेछन् ।
शिकारीले यो भावना बुझ्यो र निकै खुशी भयो । त्यसपछि परमात्मासँग वरदान माग्यो, ‘प्रभु अञ्जानमै गरेको पूजाबाट नै हजुर यति प्रशन्न हुनुभयो भने झन् जानेर पूजा गर्दा के होला ? त्यसैले मलाई हजुरको ज्ञान र भक्ति प्रदान गर्नुहोस् अनि यो पावन शिवरात्रि पर्वको दिन जानेर वा अञ्जानमै कसैले हजुरको सेवा पूजा ग¥यो भने उसको मनोकामना पूर्ण गरिदिनुहोस् ।’ भगवान् उसलाई तथास्तु भनी आशिर्वाद दिई अन्तरध्यान भए । यस्तो पावन दिनमा अञ्जानमै गरेको पूजाबाट भगवान्को दर्शन शिकारीले भयो भने हामीले बुझेर पूजा गर्‍यौं भने त्यो पूजा कसो सफल नहोला । आस्था र विश्वासका साथ शिवलिङ्गमा पूजा गर्‍यौं भने पनि हाम्रो मनोकामना पूरा हुन्छ ।
शिवलिङ्ग दुई प्रकारका मानिएका छन्– १. पार्थिव (तत्काल माटोको बनाएको) शिवलिङ्ग र २. पूर्व निर्मित वा प्राण प्रतिष्ठित शिवलिङ्ग । हामी यी दुवै प्रकारका शिवलिङ्गको पूजा गर्न सक्छौं । घर वा मन्दिरमा ब्राह्मणहरू बोलाएर रुद्राभिषेक गर्न सक्छौं । सम्भव नभए पायक स्थानमा ॐ नमः शिवाय भन्दै पूजन गर्न पनि सकिन्छ । शिवपूजनमा पञ्चामृत, जल वा दूधले अभिषेक गर्ने प्रचलन छ । यस्तै, रातभर जाग्राम बसेर भगवद्मन्त्रको जपपाठ गरी शिवजीलाई प्रशन्न बनाउन सकिन्छ । यदि पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा गरेमा पूजनपश्चाद् पवित्र स्थानमा लगेर त्यसलाई विसर्जन गरिदिनुपर्छ । प्राण प्रतिष्ठित शिवलिङ्ग हो भने विसर्जन गर्नुहुँदैन । स्वच्छ भावले परमात्मा शिवको आराधना गरेमा मनोकामना पूर्ण हुने वैदिक शास्त्रहरूले बताएका छन् ।